नयाँ नोटसँगै नक्कली नोट पनि देखिन थाले ! कसरी चिन्ने नक्कली नोट ?
कार्तिक ०५, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ- दशैँको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोटहरु सार्वजनिक गरेसँगै बजारमा नक्कली नोट पनि देखिन थालेको समाचारहरु यदा-कदा आउन थालेको छ । नक्कली नोट देखि जोगिनको लागि सर्वसाधारणले पनि आफैं सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
बैङ्किङ च्यानलमा नक्कली नोट पत्ता लगाउने प्रविधि छ। सक्कली र जाली नोट सामान्य हिसाबले पत्ता नलागेमा नक्कली नोट पत्ता लगाउन डिटेक्टर मेशिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले नक्कली नोट फालिदिन्छ। यस्तै, युवि लाइट र मेग्निफाइङ ग्लास प्रविधिको प्रयोगबाट पनि नोट सक्कली वा नक्कली पत्ता लाग्छ।
प्रकाशित : सोमबार, कार्तिक ०५, २०७५१४:५०
मोबाइल लगायतका स्क्रीनमा बढी समय बिताउने बच्चाको मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव !
सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न प्रधानमन्त्री निवास पुगेका ३० जना नेविसंघ कार्यकर्ता पक्राउ !
प्रेमको नाममा शारीरिक सम्बन्ध, त्यस पछि विवाह नभई आमा ! यस्तो छ किशोरीहरुको बाध्यता !
दुर्घटना कम गर्न चालक र सहचालकको आँखा परीक्षण
पाँच वर्षभित्रै वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता अन्त्य हुन्छ – मन्त्री गोकर्ण विष्ट